Tena malalaka Manana vokatra isan-karazany mba hanompo ny mpanjifa noho ny fonosana samihafa kitapo avy amin'ny ankamaroan'ny fananana ho tahiry, ny fitaterana ary ny fivarotana. Ny fonosana kitapo dia afaka mitondra entana avy 5kgs hatramin'ny 2000kgs amin'ny karazany maro samy hafa hita amin'ny fepetra arahana araka ny fampiasana farany.
Ny maha-zava-dehibe toy izany koa singa ampahany amin'ny vokatra, isika koa dia manome ny kitapo isan'andro amin'ny modely isan-karazany noho ny miantsena sy ny fitsidihana, sns
Ny ara-nofo no tena natao ho an'ny kitapo dia plastika (polypropylene, polythene) sy landihazo. Mora ny hahatonga antsika hanana ny tena malalaka vokatra isan-karazany. Mety hanambatra ny samy hafa sy ny lamba voatenona pp samy hafa ny mpanamboatra lamba landihazo vondrona roa ny fonosana kitapo, ny iray ho indostria ary ny iray ho an'ny fampiasana isan'andro.
, Ohatra, isika dia afaka mamokatra pp lamba ny ankamaroan'ny fepetra arahana sy ny karazana. Avy eo izahay, ka mamoaka fonosana kitapo toy ny isan-mpanjifa 'takiana ho an'ny ampahany entana, koa, isika koa fandraisantsika ny pp lamba amin'ny harona plastika fiantsenana ampiasaina amin'ny toeram-pivarotana lehibe ny sasany mety ho mpanjifa Accessories' fepetra.
Araka ny toy izany, dia efa ho isan-karazany dia afaka mamokatra ny kitapo hanome fahafaham-po ny mpanjifa hafa 'fepetra.
Rehefa avy orinasa kitapo kitapo sy isan'andro, isika dia lasa hafa
houseware zavatra, toy ny aprons, fanasan-damba kitapo, beddings, sns izay voalaza eo izao ny vokatra lehibe.
Ny isan-karazany ny PRODUCT:
A. fonosana Bags for Industry: Big kitapo, PP / PE tenona kitapo, PE sarimihetsika kitapo, harato kitapo, Paper kitapo, landihazo kitapo, OPP lamination kitapo.
B.Packaging Bags Fa Daily Use: PP fiantsenana kitapo, landihazo fiantsenana kitapo, kitapo lamba, Oxford kitapo, Jute kitapo, Cooler kitapo, Garden kitapo, Paper harona fiantsenana.
C. Housewares: Apron, fonon-tanana, lamba firakotra, fanasan-damba kitapo, pillowcase kitapo, atin'akanjo kitapo, sns
D. fitrandrahana harena ankibon'ny tany: Paper boky taratasy, Orange RC lavaka plugs, plastika kitapo zipper, Plastic andian-tsoratra, Aluminium perma tenifototra, Pin fanamarihana toerana, Test sivana fandevonana, Core lovia galv., Calico kitapo, Veggie sivana, Plastic tie, valizy fehin-kibo, fonon-tanana, Mapping palitao, Kraft taratasy kitapo, Sun satroka.